Horoscope Archives * Page2of 10 * Manaw Maya
ရာသီဖွား (၁၂)မျိုးထဲမှာ အပျိုကြီး၊ လူပျိုကြီး ဖြစ်နိုင်ချေအရှိဆုံး ရာသီဖွား (၃)မျိုး
လူတိုင်းက တခါတလေ တစ်ယောက်တည်းသီးသန့်လေး နေချင်စိတ်ရှိကြပေမယ့် တစ်သက်လုံးတစ်ယောက်တည်းနေဖို့တော့ တော်တော်လေးစဉ်းစားရမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ဘ၀တလျှောက်လုံး တစ်ယောက်တည်းနေသွားရလည်း ဘာမှမဖြစ်တဲ့သူ၊ တစ်ယောက်တည်းနေရလည်း အထီးမကျန်တဲ့သူ၊ တစ်ယောက်တည်းနေရတာ ပိုပျော်တဲ့သူတွေရှိပါတယ် အဲ့ဒါကတော့ အခုဖော်ပြမယ့် ရာသီဖွားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ မိဿရာသီဖွား ( March 21
November 3, 2019 January 15, 2020 admin
သင်​တို့ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ နံပတ် 1 ,2,3,4,5,6,0ရဲ့ ကံကောင်းခြင်း အဖြေများကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ 1
Zawgyi မိတ်ဆွေခုနှစ်နေ့ဖွား သားသမီးများအတွက် ၂၀၁၉ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ (4)ရက်မှ နိုဝင်ဘာလ( 18 )ရက်အထိ ( ဆောင်ရန် ရှောင် သတိပြုရန်နှင့် ယတြာ ) ဆယ့်ငါးရက်စာအထူးဟောစာတမ်း တနင်္ဂ​နွေ
မိမိ၏ အင်္ဂလိပ်လို မွေးသည့်ရက်ကို သိယုံနှင့် မိမိဆိုင်ရာအဟောကို ရွေးချယ်ဖတ်ရှု နိုင်ပါသည်။ 1 , 10 , 19 , 28 ရက်ဖွားများ မနက်စောစော အိမ်ဘုရားမှာ ရှောက်သီးလေးလုံးပေါ်တွင် ဖယောင်းတိုင်တစ်တိုင်စီထွန်းညှိ ကပ်လှူပါ
Zawgyi အပူသောကမျိုးစုံနှင်. ရင်ဆိုင် နေရသူများ အကျပ်အတည်များ မထွေးနိူင် မအန်နိူင်ဖြစ်နေသူများ မိမိ အိမ်ဂေဟာ ကျက်သရေ မင်္ဂလာအဖြာဖြာ ဖြစ်အောင်နှင့် လာဘ်လာဘ. ပွင့်လန်း လာစေရန် ။ အောက်ပါ အတိုင်း အကျိုးပေးလျှင်မြန် စရေအခါ
၁၃၈၁ ခုနှစ် ကြာသပတေးသားသမီများအတွက် တစ်နှစ်စာဟောစာတမ်း
Zawgyi မည့်သည်အခက်အခဲမည်မျှရှိစေ ဆောက်ရွက်စရာများ ရှေ့တိုး၍ ဆောင်ရွက်ပါ စီပွားရေးများအောင်မြင်တိုးတတ်အောင် ဆောင်ရွက်ရမည်နှစ်ဖြစ်သည် ခရီးတို၊ခရီးရှည်များသွားရကိန်းရှိသည်။ ယခုနှစ်ကံဇာတာအကျိုးပေးနိုင်ရန်မလျော့သောဇွဲ၊လုံ့လ၊ဝိရိယဖြင့် လုပ်ကိုင်ရပါမည် ဘာသာရေးလောကဖြင့် ဘဝရပ်တည်နေသုများ ၊မိမိတို့၏ သီလဂုဏ်ကြောင့်ဘုန်းတန်ခိုးများ သိသာထင်ရှားစွာ ထွက်ပေါ်လာမည်။ သံထည်ပစ္စည်း၊ထီး၊ဖိနပ်၊အထည်အလိပ်ရောင်းဝယ်ခြင်း၊စက်ပစ္စည်းများရောင်းဝယ်ခြင်း၊ အစုရှယ်ယာဝင်ခြင်း၊ရေသန့်ထုတ်လုပ်ခြင်းများအထူးအကျိုးအမြတ်ခံစားရမည်။
နိုဝင်ဘာလအတွက် မွေးရက်အလိုက် ဂဏန်းဗေဒင်အထူးဟောစာတမ်း
Zawgyi မိမိ၏ အင်္ဂလိပ်လို မွေးသည့်ရက်ကို သိယုံနှင့် မိမိဆိုင်ရာအဟောကို ရွေးချယ်ဖတ်ရှု နိုင်ပါသည်။ 1 , 10 , 19 , 28 ရက်ဖွားများ ကြင်နာတတ်သူဖြစ်ပြီးသိမ်မွေ့စွာနေထိုင်တတ်သည် သို့သော်အမှား(သို့)အမှန်ကိုတင်းကြပ်စွာလက်ခံထားသူဖြစ်သည် ယုံကြည်ချက်ပြင်းပြသည်။ ပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်တတ်သော်လည်းပူပန်သောကရောက်တတ်ခြင်းကြောင့်ဘ၀ကိုမကျေနပ်မှုများဖြစ်နေတတ်သည်
Zawgyi မိတ်ဆွေခုနှစ်နေ့ဖွား သားသမီးများအတွက် ၂၀၁၉ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ( 1 )ရက်မှ နိုဝင်ဘာလ( 15 )ရက်အထိ ( ဆောင်ရန် ရှောင် သတိပြုရန်နှင့် ယတြာ ) ဆယ့်ငါးရက်စာအထူးဟောစာတမ်း တနင်္ဂ​နွေ
Zawgyi မိတ်ဆွေခုနှစ်ရက် သားသမီးများအတွက် ၂၀၁၉ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ (2)ရက်မှ နိုဝင်ဘာလ( 8 )ရက်အထိ ( ဆောင်ရန် ရှောင် သတိပြုရန်နှင့် ယတြာ ) နာမည်အလိုက် တစ်ပတ်စာ
သင့် အိမ်ဟာ မည်သည့်ဘက်ကို မျက်နှာမူနေပါစေ သက်ရှည်ကျန်းမာ စီးပွားတိုးစေဖို့
Zawgyi မိမိကိုယ်မိမိ သက်ရှည်ကျန်းမာ စီးပွားတိုးစေလိုလျှင် လူတို့ ဦးခေါင်းထားပြီး အိပ်စက်ရာ အရပ်ဟာ မှန်ကန်ဖို့အထူးလိုအပ်ပါတယ် ။ ရှေးကလူကြီး များသည် မိမိတို့ နေရမည့်အိမ် ဆောက်လုပ် ရာတွင် မည်သည့် အရပ်ကို မျက်နှာပြု ရသည်ဖြစ်စေ